Embraer ရွေးကောက်ပွဲစီမံရေးအဖွဲ့ဟူသည် 312 အဘိဓါန် Tucano FS2004 DOWNLOAD - Rikoooo
Embraer ရွေးကောက်ပွဲစီမံရေးအဖွဲ့ဟူသည် 312 အဘိဓါန် Tucano FS2004
အရွယ်2ကို MB
downloads ရယူရန္ 8 569
Author: ဒံယလေသ da Silva & Denis da Silva & Johan Peeters
Aerobatic နှင့်လေ့ကျင့်ရေးလေယာဉ်ပျံ။ အလွန်တောက်ပပြီးအလွန်အစာရှောငျ။ ဒီ add-on multiplayer များအတွက်စုံလင်သည်။ သူ့ရဲ့သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားအားဖြင့်အရူးလုပ်ခံရမထားပါနဲ့။ သင်ဤမော်ဒယ်များ၏ပျံသန်းရညျအသှေးအားဖြင့်အံ့အားသင့်စေလိမ့်မည်။ ကြိုးစားရမည်!
အဆိုပါ Embraer ရွေးကောက်ပွဲစီမံရေးအဖွဲ့ဟူသည် 312 အဘိဓါန် Tucano စဝ်ဟိုဆေး dos Campos (ဆောပိုလိုပြည်နယ်) မှာဘရာဇီးထုတ်လုပ်သူ Embraer ဖွငျ့ယှဉ်ဖောက်မနှင့်မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးလေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အမည်ကိုဘရာဇီးစစ်ရေးသည်: မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးဗားရှင်းကို AT-27 သင်တန်းဗားရှင်းကို T-27 ။
သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလေယာဉ် 1980 နှင့် 1983 အတွက်ပထမဦးဆုံးမီးဖွားရာကိုယူ။ ဒါဟာရိုးတံမှာ Pratt & Whitney PT6 တာဘိုင်-A25C 750 မြင်းကောင်ရေအားဖွငျ့ powered ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်ကျောင်းသားနှင့်ထိန်းချုပ်မှုလက်ကိုင်အမျိုးအစားဓာတ်ငွေ့ HOTAS (Throtle နှင့် Stick အပေါ်လက်စွဲ) မှ ဆက်စပ်. အတွက်ဆရာများ၏မြင့်မားသောအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဘရာဇီးလေတပ်ဒီထုတ်ကုန်၏ထက်ပိုမို 133 ယူနစ်အမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစ Patrouille က de ပြင်သစ်၏ aerobatic ကင်းလှည့် "Smokey da Esquadrilha" ဘရာဇီးလ်နှင့်ညီမျှ equips ။ (ဝီကီပီးဒီးယား)
Embraer ရွေးကောက်ပွဲစီမံရေးအဖွဲ့ဟူသည်-121 ်ဂျီအို FS2004